iSpyoo ကို Android များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သူလျှိုဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. Android အတွက်ဗားရှင်းစာသားမက်ဆေ့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းလည်းပါဝင်သည်, ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ပျောက်အတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့် GPS တည်နေရာကိုပဌနာ. ဒါဟာ Android OS ကို၏သဟဇာတဗားရှင်းတွေကို run နေအများဆုံး Android ထုတ်ကုန်နှင့်အတူလက်ရှိတွင်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်. Mobile Spy is also the world’s only professional-grade Android spy!
iSpyoo Android မှာများအတွက်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါ:
Verizon အသိပေးခြင်း: သင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို Verizon လိုလျှင်, သငျသညျ ရပါမည် မိုဘိုင်းသူလျှိုများ၏ GPS စနစ်ခြေရာခံနိုင်တဲ့ feature ကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ GPS န်ဆောင်မှုမှ subscribe. သင်သည်သူတို့၏ GPS စနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ subscribe ဘူးဆိုရငျ,iSpyoo ပါလိမျ့မညျ မဟုတ်ပါ အဆိုပါ monitor device ရဲ့ GPS တည်နေရာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မည်.
See more on iSpyoo သူလျှိုက Android ကိုတပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက် or Click image below
iSpyoo iPhone အတွက်ဦးဆောင်သူလျှိုဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်, iPad နှင့် iPod ကို. စာသားမက်ဆေ့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်, ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ပျောက်မှာသူတို့ရဲ့ Apple ၏ iPhone ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့် GPS တည်နေရာကိုပဌနာ, ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုအလုပ်မ. ဖုန်းကိုဒေတာအစီအစဉ်ရှိရမယ် & ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းသူလျှိုဆော့ဖ်ဝဲများကိုသင့်ရဲ့အကောင့်ကို log များ upload တင်လို့ရပါတယ်တစ်ခုအင်တာနက် connection. Mobile Spy is the world’s first and best iPhone spy software!
iSpyoo iPhone / iPad များအတွက်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါ:
website ကသမိုင်းကို, ဓါတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ (ဖုန်းကိုယူ), ဆဲဆိုသတိပေး, ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုအချက်ပေး, custom အချက်ပေးတဲ့ Keyword, ဆက်သွယ်ရန်အချက်ပေး, Geo-ခြံစည်းရိုးအချက်ပေး, SMS စာတိုစစ်ဌာနချုပ် Capability, ဆက်သွယ်ရန်စာရင်းများ, Gmail ကို, မူလတန်း E-mail ကို inbox ရဲ့, YouTube ကဗီဒီယို, auto Update ကို, Facebook က Messenger ကို, WhatsApp ကို Messenger ကို, bookmarks (Safari က), Daily သတင်းစာသို့မဟုတ် Weekly ဂျာနယ်က New မှတ်တမ်းများစာရင်းအင်းများ, Recovery ကို (Lock, Data ကို Wipe, ဂျီပီအက်စ်), ပြက္ခဒိန်အဖြစ်အပျက်များ, memo မှတ်တမ်းများ, Installed apps များ, Block ကို 's Apps, မှတ်တမ်းများကအီးမေးလ် Get, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ – iPhone ကိုသာလျှင်, iMessage, သစ်လုံး Call – iPhone ကိုသာလျှင်, GPS တည်နေရာ, စံချိန်ပတ်ဝန်းကျင်, Stealth Camera..